नचेत्ने हो भने… | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर सम्पादकीय नचेत्ने हो भने…
नचेत्ने हो भने…
कोेरोना सङ्क्रमणको मामिलामा वीरगंज देशभरिमैं रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । यसमा राज्यको जति कमजोरी देखिएको छ, पछिका दिनमा यहाँका नागरिकमा अति लापरवाही पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । यद्यपि अहिले सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएसँगै नागरिक फेरि सचेत बन्न थालेको छ । यसको प्रभाव कहाँ देखिएको छ भने हिजो प्रशासनले निषेधाज्ञामा सेवाप्रदायक क्ष्Fेत्र निर्धारित समयमा मात्र खोल्न पाउने निर्देश दिंदा लुकीछिपी प्रायः सबै क्षेत्र खुल्दथे । अहिले सेवाप्रदायक क्षेत्र खोल्न बाधा नपुग्ने प्रशासनले  खुकुलो पारे पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुलिरहेका छैनन् । किरानापसल, अन्य उपभोक्ता पसलहरू, जो हिजो निषेधाज्ञामा पनि खुलेका थिए, तीबाहेक प्रायः पसलहरू स्वचेष्टाले बन्द छन् । तर घरमा आगलागी भएपछि कुँवा खन्ने उक्तिजस्तै भयो । यसबीच कोरोनाको सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ । अबको काम भनेको निषेधाज्ञा लागू रहेकै अवस्थामा कम्तीमा अनिवार्यरूपमा एक घर एक परीक्षण गरेर प्रभावित भएकालाई आइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनिवार्य यस कारण कि हाम्रो समाजमा अज्ञानताको कमी छैन, मानिस संवेदनशील अवस्थामा पनि परीक्षण गराउन राजी हुँदैन ।
रोग लुकाउनुपर्छ भन्ने आदिमयुगीन अति अन्धविश्वास अहिले पनि हाम्रो समाजमा कायम छ । त्यसमा केही धर्मावलम्बीहरू ईश्वरले चाहे मात्र कसैको मरण हुन सक्छ भन्ने विश्वास पालेर बसेका छन् । ती यो कुरा बुझ्दैनन् कि आत्महत्या ईश्वरको प्रेरणाले होइन, व्यक्तिको मानसिक कमजोरीको प्रतिफल हो । मानिसमा आफैं बाँच्ने सशक्त इच्छा र अदम्य कामना छैन भने ईश्वरले पनि उसको रक्षा गर्दैनन् । हिजो जब सङ्क्रमणको प्रकोप बढेको थिएन, सामान्य मानिस पनि परीक्षण गराउन ताँती लाग्ने गरेका थिए, अहिले प्रकोप बढेसँगै परीक्षण गराउन मानिस हच्किरहेका छन् । उनीहरू त्यस बेला मात्र परीक्ष्Fण गराउन तत्पर हुन्छन्, जब उनीहरूलाई लाग्दछ, मलाई केही भएको छैन । हाम्रो समाजको मति यस्तो र यसै समाजमा कोरोनाको सङ्क्रमणको गति मुलुकभरिमा उच्च छ । खासगरी वीरगंजमा सङ्क्रमणसँगै महामारीबाट मर्ने व्यक्तिहरूको पनि सङ्ख्या उच्च छ । विश्वको ३–४ प्रतिशत मृत्युदरमा वीरगंजको मृत्यु दर बढी देखिएको छ । साथै सङ्क्रमणको दर १५ सम्म पुग्न लागेको छ । सदाशयता रोगीसँग राख्ने हो, रोगसँग होइन । तर हामीले रोगीसँग दूरी र रोगसँग सामीप्यता राखेका छौं । वीरगंजमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुमा यही कारण हुन सक्दछ । शायद यसैले पनि मानिसहरू अहिले परिक्षणबाट जोगिन खोजिरहेका छन् । तर यसले मानिसको मनोबल कमजोर बनाउँछ । वीरगंजका एकजना कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भनेका पनि छन्, यहाँ कोरोनाबाट बढी मृत्यु हुनुमा कोरोनाको त्रास जिम्मेवार छ ।
समस्या यो छ कि कोरोनाबाट भागेर होइन, सामना गरेर मात्र पार पाउन सकिन्छ । कसैमा लक्षण देखिएपछि परिवार वा समाजले परीक्षण गराउन दबाब दिनुपर्छ । राज्यले पनि थाहा पाएपछि अनिवार्य परिक्षण गरी उसबाट सर्ने क्रमलाई विराम दिनुपर्छ । परीक्षण गराउनु वा नगराउनु व्यक्तिको इच्छाले होइन, समाजको सुरक्षाको दृष्टिले आवश्यक छ । खासगरी जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समाजसेवीहरू यस दिशामा सक्रिय हुनुपर्छ ।
अघिल्लो लेखमा२०७७ साउन २९ गते बिहिवारको प्रतीक दैनिक
अर्को लेखमागरीब अमेरिकीहरूको भण्डार : वालमार्ट
जनता आवास कि मजाक ?
विगतबाट के सिक्यौं ?
मोटरसाइकल चोर्ने दुईजना पक्राउ
कालिकाले जवाफ दिनुप–यो
नयाँ वर्ष र कोरोना